Dum (2003) Hindi အပြည့်အဝ Movie | Vivek Oberoi | Diya Mirza |
အကြီးမားဆုံး cashback ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူယခုစစ်မှန်အိန္ဒိယအကြောင်းအရာအဘို့သင့်တစ်နေရာတည်းမှာ ဦး တည်ရာ! ရူပီး ၁၂၉ နှင့်အထက်ရှိသောမည်သည့် pack ကိုမဆို ၀ ယ်ယူရာတွင် 100% Paytm cashback အထိရယူပါ။ မြန်မြန် သွား၍ ယခုစာရင်းသွင်းပါ - https://shemaroo.com/ShemarooMovies/
---------------- Soundtrack -----------------
10:48 - ဒမ်
33:17 - Jeena
1:16:16 - Suntaja
1:28:57 - Dil Hi Dil Mein
ရဲအရာရှိတစ် ဦး ဖြစ်သော Uday သည်သူ၏အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်လုံ့လဝီရိယရှိသူဖြစ်သည်။ သို့သော်သူသည်ဘဝကိုအလွန်ခက်ခဲစေသည့်အကျင့်ပျက်အရာရှိဖြစ်သောသူ၏သာလွန်မြင့်မားသော Shankar ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရမည်။
ဒါရိုက်တာ - Eeshwar Nivas
ထုတ်လုပ်သူ - Ali Morani၊ Karim Morani
Starcast - ဗစ်ဗက်အိုဘာရိုင်၊ Diya Mirza၊ Atul Kulkarni၊ Govind Namdeo၊ Mukesh Rishi, Sushant Singh
Written - Dharani
ဂီတ - Sandeep Chowta
ရုပ်ရှင် - Surinder Rao က
တည်းဖြတ် - Bharat Singh က
အကြီးမားဆုံး cashback ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူယခုစစ်မှန်အိန္ဒိယအကြောင်းအရာအဘို့သင့်တစ်နေရာတည်းမှာ ဦး တည်ရာ! ရူပီး ၁၂၉ နှင့်အထက်ရှိသောမည်သည့် pack ကိုမဆို ၀ ယ်ယူရာတွင် 100% Paytm cashback အထိရယူပါ။ ယခုလျင်မြန်စွာ & မှာယူပါ:
အလုပ်မှာ Aan-Men (HD) | Akshay Kumar ကို Sunil Shetty | Shatrugha Sinha | ဘောလီးဝုဒ်လှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင်
Dum l Vivek Oberoi, ၂၀၀၃ Dia Mirza l
ဒမ် (2003) | ရုပ်ရှင်အပြည့်အစုံ Vivek Oberoi | Diya Mirza | ဘောလီးဝုဒ် Romantic ရုပ်ရှင်
Akshay Kumar ၏ Blockbuster Hindi အပြည့်အဝ Movie | Manoj Bajpayee, Kajal Aggarwal, Jimmy Sheirgill
6,2 mln. weergaven
Zila Ghaziabad Full Hindi Movie | Sanjay Dutt | Arshad Warsi | Vivek Oberoi | နောက်ဆုံးပေါ်ဟိန်ဒီရုပ်ရှင်
24 mln. weergaven
RAKHT CHARITRA 1 - ဘောလီးဝုဒ်တွင်ရုပ်ရှင်အပြည့် Movie | နောက်ဆုံးပေါ်ဟိန်ဒီရုပ်ရှင် Vivek Oberoi, Radhika Apte
Ek Ajnabee (HD) Amitabh Bachchan၊ Arjun Rampal၊ Perizad Zorabian - Eng Subtile With Bollywood ရုပ်ရှင်
Shagird ၂၀၁၁ - လှုပ်ရှားမှု၊ ရာဇ ၀ တ်မှု။ Nana Patekar, Anurag Kashyap, Mohit Ahlawat
ကြေးစား | အပြည့်အဝလှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင်
မစ်ရှင် Istaanbul 2008 | Action Movie | Zayed Khan, Vivek Oberoi
1,8 mln. weergaven
C Kkompany 2008 - ဟာသရုပ်ရှင် Tusshar Kapoor, Raima Sen, Anupam Kher, Rajpal Yadav
Kurukshetra 2000 | Full Hindi ရုပ်ရှင် Sanjay Dutt, Mahima Chaudhary, Om Puri, Mukesh Rishi
Bellamkonda Srinivas အသစ်တောင် Movie Hindi Dub | Kajal Aggarwal | တောင်အိန္ဒိယရုပ်ရှင်, Hindi Dubbed
281 mln. weergaven
Be Shakal (Aruvam) 2021 အသစ်ထုတ်ထားသော Hindi Dubbed Movie | Siddharth, ကက်သရင်း Tresa
Diljale ရုပ်ရှင် (၁၉၉၆) Ajay Devgan | Sonali Bendra | Eng Subs ဖြင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်း 90 ဟိန်ဒီရုပ်ရှင်
245 mln. weergaven
Lal Baadshah | Bollywood Hindi အပြည့်အဝ Movie | Amitabh Bachchan, Manisha Koirala, Shilpa Shetty
ुजमुजरिम - बॉलीवुडएक्शनफुलमूवी။ Judge Mujrim (၁၉၉၇) Full Movie | सुनीलशेट्टी, जीतेन्द्र
2,7 mln. weergaven
Shool (HD) | Raveena Tandon | Manoj Bajpayee | Sayaji Shinde | ဘောလီးဝုဒ်လှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင်
6,9 mln. weergaven
Lokhandwala ၂၀၀၇ ပစ်ခတ်မှု - လှုပ်ရှားမှု။ Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Sunil Shetty, Vivek Oberoi ။